Uta uye museve nyora | Kunyora
Nat Cherry | | Zvinhu uye zvinhu nyora
Yakashongedzwa, yakapusa uye yakanaka. Aya ndiwo marongero anoita uta nemiseve. PaSvondo ino masikati tinokuunzira muTatuantes sarudzo yemhando iyi yematatoo ayo ave akakurumbira kwazvo mumakore apfuura.
Uye ndizvo izvozvo sekutaura kwedu, kureruka kwayo pamwe nekuchena kwekugadzira zvimwe zvezvakakosha maitiro izvo zvakatungamira kuparadzira urwu rudzi rwematato mumatehwe mazhinji. Zvino, zvinorevei? Tinozvikurukura pazasi.
1 Uta nemiseve nyora zvirevo
1.1 Miseve nyora zvirevo
1.2 Kukotamira nyora zvirevo
1.3 Zvinoreva uta nemuseve pamwechete
2 Maitiro ekuita zvakanyanya tatoo nechombo ichi
3 Mifananidzo yeBow uye Arrow Tattoos
Uta nemiseve nyora zvirevo
Matatoo anoratidza uta nemiseve zvine zvirevo zvishoma izvo zvinoenderana nekuti iyo tatoo inomiririrwa chete nemuseve, uta, kana zvese zviri zviviri.
Miseve nyora zvirevo
Iyi inyaya yakaoma, kubvira izvo zvinoreva miseve nyora dzinogona kusiyana zvichienderana nezvinhu zvakawanda. Semuenzaniso, changa chiri chishandiso chinoshandiswa nevanhu vazhinji mumazana emakore kuzvivhima nekuzvidzivirira ivo, semaNative America.
Nekudaro, isu tichaongorora zvimwe kuitira kuti unyatsojekesa nezve zvinangwa zvinoreva izvo zvauri kuenda kumatato (isu tinoti "chinangwa" nekuti pakupedzisira chakakosha kukosha kwekuti iyo tattoo ine iwe uye kwete kwevamwe).
Una solo museve unogona kuratidza kuti iwe uri mumwe wevaya vanotevera nzira yako wega. Kuti hauna hanya nezvinofungwa nevamwe uye kuti iwe unotevera nzira inonongedzwa nemuseve wako, chimwe chinhu senge kambasi, uye zvakare zvinowanzo kuratidza kuti une chinzvimbo kana kuti wakazvipira kuchinangwa chako. Kune rimwe divi, inogona zvakare kuve mucherechedzo wekudzivirira, zvichiratidza kuti hausi kutsvaga kupokana asi kuti urikuda kuzvidzivirira kana zvichidikanwa.
Uyewo, museve wakakamurwa nepakati waishandiswa kuratidza kuti kupera kwekukonana kwasvika kana kuti unoda kuviga hatchet. Inowanzobatanidzwa sechiratidzo cherunyararo. Mune tattoo, inogona kuratidza kukunda kwenguva yanetsa.
Munyaya ye peya yemiseve yakayambuka, inowanzoenderana nehukama. Kazhinji nguva iyi tattoo inogona kuitwa nemumwe munhu semapatya matatu, kuratidza padanho rekuzvipira riripo pakati pevanhu vaviri. Kunyangwe hongu, gara uchifunga kuti kana miseve iri kunongedza munzira dzakasiyana zvinoreva kuti pane kunetsana.
Pakupedzisira, ndiani asingazivi miseve yaCupid? Zvakanaka, chingave chimwe chikonzero che tattoo. Uye unogona inofananidzirwa nemuseve unoyambuka moyo. Kana iyo inogona kutofananidzirwa semuseve une tip kana feather yakaita kunge moyo.
Kukotamira nyora zvirevo
Sezvineiwo, Kusiyana nematato miseve, zvinonetsa kuwana maTatoo mune iyo chete uta hunobuda. Ivo vanowanzo perekedzwa neumwe kana anopfuura miseve, sezvo uta pachacho unongova chishandiso chisina zvese zvinoshandiswa pasina miseve.
Imwe mukana ndeyekuti iyo tattoo yeuta inogona kuitwa sezvinoitika mumiseve yakayambuka uye kuti inozadzikisa tattoo. Iri izano rakanaka kune vaviri, imwe nyora uta uye imwe nyora museve. Sezvingafungidzirwa, ine zvarinoreva zvakafanana nezvatakataura nezve miseve yakayambuka, nekuti zvinoreva kuti vaviri pamwechete vane simba.
Zvinoreva uta nemuseve pamwechete
Kunyange pachayo uta uye museve nyora haina chairo chirevoOse miseve nemiseve zvine hukama nechiratidzo cheZodiac cheSagittarius.
Uyewo, zvinoenderana nenzira yavanogadzirwa, iyo Zvinoreva miseve uye maberere anogona kuenderana neese ari maviri epasirese epasi seyakugadzira nepo ichichengetedza hukama nenyika yemadzitateguru.
Uye zvakare Ivo mucherechedzo wehondo uye hushe medieval. Kune rimwe divi, vapfuri vane chirevo chakabatana nekudzivirira. Kunyanya, iyo dziviriro inopihwa nemupfuri munguva dzekare kuseri kwemuti kana yakavanzwa mumakwenzi.
Uyewo tine zvirevo zvakati wandei zvinoenderana nemamiriro euta nemuseve. Semuenzaniso, uta hunodhonzwa nemuseve wakatakurwa zvinogona kureva kumwe kunetseka kune chimwe chinhu, ndosaka ichi tattoo ichiwanzoenda pamwe chete neicho chinoburitsa kunzwa uku. Semuenzaniso, kana tiri vavengi vanofa vebroccoli tingave neuta hwakatakurwa nemuseve wakanangana nemuriwo uyu.
Kune rumwe rutivi, kana museve wapfurwa une chirevo chakapesanaIko kunetsekana kwakange kwanyangarika uye kuti isu tava kukwanisa kutevera museve uyo unoratidza nzira yedu. Inogona kuva nechirevo chakafanana neicho chemuseve uri woga, watinotevera kumuka kwawo.
Chekupedzisira, kune avo vanowedzera museve kana mubvi kune iyo tattoo, iyo yatove nayo hatisi kuzvibatanidza neuta nemuseve asi nemunhu anotakura. Sezvatambotaura, mupfuri anobatana nekudzivirira uye ndizvo zvinogona kunzwisiswa kubva kune ino tattoo.
Maitiro ekuita zvakanyanya tatoo nechombo ichi
Sezvo isu tichiwanzoti muganho ndiko kufunga kwako, unogona kurukura nezvako nemu tattoo wako kuti uwane zvakanakisa kubva pane yako pfungwa. Uye ikozvino isu tichaenda kupa iyo hurukuro mamwe maranzi.
Kazhinji uta uye museve nyora dzinowanzo kuve neyakaenzana minimalist maitiro uye diki saizi (kunyangwe paine nguva dzose zvinosara). Zvimiro zvejometri senge denderedzwa, maRhombus, marange, ovals uye zvikwere zvinowanzo shandiswa kuti zvipe kubata kwekureruka kukuru. Kune vamwe zvakare vanowedzera kubata kwepanyama nekuwedzera ivy patambo kana kunyange mashizha pamubato wemuseve.
Kune vamwewo vanosarudza ipa iyo yekubata pachako uchishandisa museve shaft kunyora izwi, senge zita rehama, kana chimwe chiratidzo chaunozviratidza kana chaunoda.
Sezvo isu takapindura inogona zvakare kuve iri zano rakanaka kune ekuwedzera matatoo. Mumwe anogona kutora uta uye mumwe museve. Isu tatoona imwe umo imwe neimwe inowana imwe hafu yemuseve. Iko zvakare kune sarudzo yekugadzira yakayambuka miseve seye mapatya matatu, kumiririra hushamwari hwakanaka.
En los maTattoo anobuda nemuseve isu tine zvakawanda zvingasarudzwa. Kuti mupfuri ndiye mutumwa watinozodzivirirwa nawo naMwari. Inogona zvakare kuve muNative American kana maAmazon, ayo zvakare anoshanda kukumbundira chikamu chedu chemukadzi.
Hapana mubvunzo uta nemuseve nyora dzine matani ezvinoreva uye mikana, uye inokodzera tattoo yakapusa. Tiudze, une chimwe chezvinhu izvi zvakatemwa nyora here? Zvinorevei kwauri? Wakadii nyora yako?
Mifananidzo yeBow uye Arrow Tattoos
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kunyora » Mhando dzematatoo » Zvinhu uye zvinhu nyora » Uta nemuseve nyora, dzakatarisana nehunyanzvi uye kugona